Nezvedu - TSINFA
Muri pano: Kumba1 / Nezvedu
Shandong TSINFA CNC Equipment Co., Ltd. yakavambwa muna 2000, iyo yekutanga yekugaya muchina zvigadzirwa zvekambani kutanga zvigadzirwa, mukuvandudzwa kweinoramba ichitsva, kuburikidza nekuzvimiririra kwekutsvaga nekuvandudza kugadzirwa, brand oparesheni uye dzimwe nzira dzekuwedzera chigadzirwa chigadzirwa. . Zvigadzirwa zvinovhara simbi yekucheka uye simbi inogadzira marudzi maviri, chaiyo CNC cylindrical grinder, kumeso cylindrical grinder, CNC lathe, cnc matatu-axis machining centre, ina-axis CNC yekuzadza muchina, radial kuchera muchina, CNC mubhedha, shaper, yakajairwa lathe, yepasi azvikuya muchina, kuchera muchina wekugaya, hydraulic muchina. Zvigadzirwa zvinotengeswa zvakanyanya mumisika yepamba neyekunze.
Mumakore achangopfuura, kambani yakanangana nepamusoro-kuguma kugadzira uye kutengesa kweCCC maturusi maturusi, michina uye dhizaini dhizaini nekusimudzira. Yakagadziridza iyo TFA nhevedzano yemotokari yekugaya uye yekukomba inoumba kutenderera nzvimbo, BK yakateedzana ina-axis CNC mubhedha, kusangana nevatengi zvinodiwa kuti ibudirire kugadzirisa. Kukosha kwedu uye chinangwa ndechekugadzira dhizaini-inoshanda kune vashandisi nevatengi, kunatsiridza chigadzirwa uye kukosha kwebhizimusi nekugadzirwa uye nehunyanzvi hwekushandira.
Makambani anoteerera kutendeseka kwemhando yepamusoro, kuona kuti michina yega yega inokodzera kufekitori, kuona kuti vanogona kuita zvavanogona kuvashandi nevatengi.
Tinogona kupa zvishandiso zvemuchina zvinosanganisira:
Metal Anoumba muchina
Hydraulic muchina wekudhinda
Band Kucheka muchina
TOUR Drilling Machine,
Gantry hwokugaya hwakabvira Machine,
Manual hwokugaya hwakabvira Machine,
Universal hwokugaya hwakabvira Machine uye zvichingodaro.
Une ruzivo rwemakore mazhinji kudaro 'kuunganidza uye kukura, isu tatova vatengesi vakakura vemashini maturusi uye mhinduro kune vatengi vedu, mhando yakagadziridzwa ichienderera mberi, dhizaini dhizaini uye kugadzira tekinoroji kwakagadziridzwa futi.
Nekuwedzera kwekugadzira chikero, isu takagadzira kana kutenga akawanda akakwenenzverwa michina inosanganisira yakakura-chikamu mhando pasi yekugaya / inofinha muchina, yakakwira Precision giraidhi yekugaya, mapfumbamwe musoro wemusoro wekugaya muchina uye zvichingodaro, apo ichisangana nezvatinoda, kugadzirwa kwekugadzira kwakawedzera.
Inoshandiswa yemakuru-emhando yepasi pasi yekugaya / inofinha muchina, zvinoita kuti isu tikwanise kuburitsa hombe CNC yakamira lathe uye yakakura longmen yekugaya muchina.
Yakakura-chiyero chepamusoro-Precision gwaro njanji yekugeda muchina inoshandiswa kukuya kune lathe mubhedha gwara njanji, chengeta yakakwira kunyatso.
Anoshandiswa mapfumbamwe musoro azvikuya muchina, izvozvo anovandudza kugadzirwa kunyatsoshanda chinjikira lathe mubhedha zvikuru, kamwe sharping, pashure kupinda Large-pamwero mutungamiriri njanji vachikuya muchina kumugumo machine.
Muchina wakasarudzika wekugadziriswa kwe lathe musoro bhokisi, ita musoro bhokisi rakapetwa kamwe nguva, kugadzirwa kwekugadzira kwakanyanya zvakanyanya.
Yemhando Yekuongorora michina:
takaisa mari yakawanda kutenga nyika-kirasi mhando yekuongorora michina, senge kuyera ruoko, simba chiyero, Renishaw laser interferometer, nezvimwewo, ita shuwa kuti yega yega muchina chishandiso inoongororwa zvakanyanya.